मृत्यु र अनित्यता चिन्तनका लागि चार प्रमाण — Study Buddhism
भाग ३ / ६
मृत्यु र अनित्यता चिन्तनका लागि चार प्रमाण
हाम्रो लक्ष्य के हो?
विषयको सम्पूर्ण बोध हासिल गर्नु
अभ्यास जारी राखौं
मृत्युका बारेमा किन चिन्तन गर्ने?
मृत्यु निश्चित छ, त्यसैले निश्चिन्त होउ
जीवनको तार्किक निष्कर्ष हो मृत्यु
ध्यानसाधना तीन चरणको प्रक्रिया हो भन्ने हामीले जान्यौं, जसमा शिक्षाको श्रवण, चिन्तन र तिनमाथि गरिने ध्यान पर्छन्। तेस्रो चरण अर्थात् ध्यानमा हामी सिकेका कुरालाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने अभ्यास गर्छौं। यसका लागि बारम्बार आफ्नो अभ्यासलाई दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ। मूलतः एक सकारात्मक चित्तावस्थाको निर्माण गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो, जसलाई हामी आफ्नो स्वाभाविक प्रवृत्तिका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं। यसका लागि अभ्यासलाई बारम्बार दोहोर्याउनुपर्छ।
हामी शिक्षाको श्रवण गर्छौं। यसबाट प्रज्ञाको विकास हुन्छ, र “यो त बुद्धकै शिक्षा हो” भनेर छुट्याउन र त्यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ। हामीले अर्को चर्चा पनि गर्यौं – शिक्षा पूरै बुझिएन भने पनि त्यसलाई निश्चित पूर्व मान्यताको आधारमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। हामीमा शिक्षा ग्रहणको आकांक्षा र प्रेरणा हुन्छ। त्यसैले प्राप्त शिक्षालाई सही नै होलान् भनेर लिन्छौं, र जबसम्म ती गलत साबित हुँदैनन्, तबसम्म ती ठीकै होलान् भन्ने मान्यताअनुसार चल्छौं। कुनै कुरा सत्य होइन भन्ने हामीले पत्ता लगायौं भने त्यसलाई हामी छाड्न सक्छौं। तर हामीले प्रारम्भमा मान्यताकै स्तरमा भए पनि शिक्षा सही नै होलान् भनेर आफ्नो मनलाई खुला राख्नु जरुरी छ। त्यसपछि हामी ती शिक्षा सही हुन कि होइनन् भनेर अन्वेषण गर्छौं। शिक्षालाई हामी भिटामिनसँग तुलना गर्न सक्छौं। हाम्रा लागि ती भिटामिनजस्तै हितकारी होलान् भन्ने मान्यता राख्छौं। विषजस्तो लाग्ने कुरालाई त हामी अपनाउने प्रयत्न नै गर्दैनौं, “यसलाई एकपटक चाखिहालौं, यसले म मर्छु कि मर्दिन जाँचेर हेरौं” – विषको हकमा हामी यसरी सोच्दैनौं, तर भिटामिनको हकमा एकपटक परीक्षण गरेर हेरौं भनेर सोच्छौं। धेरै मानिसले यसबाट लाभ हुन्छ भनेका छन्, त्यसैले म पनि एकपटक आफैं जाँचेर हेर्छु – यस्तो भावले हामी शुरु गर्छौं।
शिक्षामाथि चिन्तन गर्दा हामी चिन्तनमयी प्रज्ञा अर्थात् चिन्तनका माध्यमबाट प्रज्ञा जागृत गर्न खोज्छौं। यो चरणमा हामी शिक्षालाई पूर्ण रूपमा बुझिसक्छौं। बुद्धले सिकाएका कुरा सत्य रहेछन्, त्यसबाट साँच्चिकै हामीलाई लाभ हुन्छ, र हामीले चाहेको अवस्था प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने जान्दछौं। यी चरणहरू पार नगरी अगाडि बढ्न खोज्दा मानिसहरू प्रायः अल्मलिन्छन् र केही समयपछि “निष्कर्षहीन दुविधा” मा पर्छन्। यो अविश्वासको अवस्था हो। वाञ्छित अवस्था प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने कुराप्रति नै शंका हुन थाल्छ, र उनीहरू अभ्यास छाडिदिन्छन्।
हामी मुक्ति वा बोधि र तिनलाई प्राप्त गर्ने विधिका बारेमा पढ्दैछौं। तसर्थ हामीले मुक्तिको अर्थ ठीकसँग बुझ्नुपर्छ। बोधि प्राप्त गर्नुको वास्तविक अर्थ के हो? र बोधि प्राप्त गरेपछि के हुन्छ? यो कुरा जान्नुपर्छ। ज्ञान भएपछि के हुन्छ? बौद्ध शिक्षाहरूमा के भनिएको छ भने जो बुद्ध हुन्छ, उ सर्वज्ञानी हुन्छ, उसले एकै समयमा सबै चीजको पूर्ण र सही ज्ञान लिन सक्छ। यस्ता बुद्धजनले सबै जीवको समान रूपमा ख्याल राख्न सक्छन्, र उनीहरू हरेकलाई ठीकसँग कुरा बुझाउन सक्छन्। यसरी बुद्धजनले सबै जीवलाई सर्वोत्तम तरीकाले सहयोग गर्न सक्छन्।
यो सत्य हुन सक्ला कि दन्त्यकथा मात्र होला? यदि हामीलाई यो वाहियात र बेकारको कुरा जस्तो लाग्छ भने हामीले हासिल गर्न खोजेको कुरा के हो त?यसमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। यो दन्त्यकथा मात्र हो भन्ने लाग्छ भने यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वास हुने कुरै भएन। हामीले बुद्धधर्ममा बताइएका लक्ष्यलाई विवेचना गरेर हेर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक प्रेरणालाई पनि विचार गर्नुपर्छ।
बुद्धधर्ममा प्रेरणा शब्दको अर्थ विशिष्ट छ। हामी प्रायः भन्छौं – “प्रेरणा जागृत गर वा यसलाई पुनः सबल बनाउ।” यसका दुई पक्ष छन्। एक हो ध्येय – अर्थात् हामीले लिएको लक्ष्य, र अर्को हो – त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीलाई उत्प्रेरित गर्ने आकांक्षा वा मनोभाव। प्रायः हाम्रो सामान्य भाषामा प्रेरणा शब्दले यही दोस्रो अर्थात् कुनै कुरा गर्न हामीलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्थ दिन्छ।
मलाई लाग्छ, धेरै मानिसले आफ्नो वर्तमान जीवनलाई अलि सुखद बनाउने र खुशी प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ बुद्धधर्मको अभ्यास गर्छन्। यो ठीकै हो। मैले यसलाई “धर्म–लाइट” भन्ने गरेको छु। यो पहिलो चरण हो। यसपछि “द रियल थिङ्ग धर्म” पनि छ, जहाँ हामी आफ्नो पुनर्जन्मलाई सुधार्ने र भविष्यमा पनि अमूल्य मानव चोलामै जन्म लिने लक्ष्य राख्छौं। तर तपाईंलाई पुनर्जन्ममा विश्वास छैन भने सुधारिएको पुनर्जन्मको लक्ष्य राख्नै सक्नुहुन्न। पुनर्जन्मलाई बुझ्नका लागि हामीले कुन चीजको पुनर्जन्म हुने हो, चित्तको निरन्तरता कसरी हुन्छ, आफ्नो वास्तविक स्वरूप के हो, आदि कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ। हुनत पुनर्जन्म राम्रो होस् भन्ने लक्ष्य बौद्धमार्गीले मात्र राख्दैनन्। क्रिश्चियन र अरु धर्मावलम्बीले पनि यस्तो लक्ष्य राख्छन्। क्रिश्चियनहरूको हकमा चाहिँ यस्तो पुनर्जन्म स्वर्गमा होस् भन्ने चाहना हुन्छ।
अर्को लक्ष्य अनियन्त्रित तवरमा हुने पुनर्जन्महरूबाट मुक्त हुने हो। हिन्दूधर्ममा पनि यो लक्ष्य लिइन्छ। बुद्धधर्मअनुसार मुक्त हुनुको अर्थ के हो, हामीले जान्नुपर्छ। साथै मुक्ति प्राप्त गर्ने विधिहरू के हुन्, त्यो पनि जान्नुपर्छ। बुद्धधर्मको अन्तिम लक्ष्य बुद्धले जस्तै बोधिको अवस्था प्राप्त गर्नु हो। यो नै बुद्धधर्मको विशिष्टता हो।
बुद्धधर्मका शिक्षाको प्रकृति हेर्ने हो भने हामी पाउँछौं कि धर्मको अभ्यासमा हाम्रो प्रगति क्रमिक रूपमा मात्र हुन्छ। एक ज्ञानले अर्को ज्ञानको बाटो खोल्छ। यो कुरालाई आत्मसात नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन। “म सबै जीवको हितका लागि बुद्ध बन्न चाहन्छु” भनेर मात्र काम चल्दैन, ती केवल अर्थहीन शब्दहरू मात्र हुनेछन्। के हाम्रो लक्ष्य यो ब्रह्माण्डका सबै जीव, सबै स–साना किटपतंगहरूलाई समेत साँच्चिकै मुक्त गराउने र तिनीहरूलाई बुद्ध बनाउने हो? अवश्य पनि होइन। त्यो स्तरको लक्ष्य राख्न हाम्रो चित्तको दायरा अकल्पनीय रूपमा फराकिलो हुनुपर्छ। त्यस्तो लक्ष्य राख्ने हो भने हामीले त्यो कुरालाई साँच्चिकै भित्रैदेखि ग्रहण गरेको हुनुपर्छ, र त्यो दिशामा क्रमिक रूपमा आफूलाई प्रशिक्षित गरेको हुनुपर्छ। यसरी धर्ममा अगाडि बढ्ने क्रममा हामी धर्मको शिक्षालाई परीक्षण गरेर हेर्छौं। यसरी परीक्षण गर्नका लागि हामी “चार स्वयंसिद्घ प्रमाणहरू” (युक्ति चतुष्टयम्) को सहारा लिन्छौं, जुन हरेक कुराको परीक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो परीक्षण हामी धर्मको मूलभूत कुराहरूबाट शुरु गर्छौं।
उदाहरणका रूपमा, हामी मृत्यु र अनित्यतालाई यी चार प्रमाणहरूको कसीमा राखेर बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौं। हुनत यो उदाहरण लिनुका पछाडि पनि मेरो व्यक्तिगत कारण पनि छ। मेरो अनन्य मित्रको निधन भएको एक हप्ता मात्र भएको छ। जे होस्, प्रमाणका चार कसीहरू निम्नानुसार छन्ः
निर्भरताको कसी – हामीले जागृत गर्न लागेको चित्तावस्था, अर्थात् मृत्युबोध, के मा निर्भर गर्छ?
व्यावहारिकताको कसी – यदि हामीले उक्त चित्तावस्था प्राप्त गर्यौं भने यसले हामीलाई के गर्छ र यसका फाइदाहरू के हुन्?
तर्कको कसी – प्राप्त शिक्षा सही छ कि छैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्न हामी यसरी परीक्षण गर्छौं ः के यो बाँकी बौद्ध शिक्षासँग मेल खान्छ? के यो तर्कसंगत छ? हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्यायौं भने यसले भनेजस्तो नतिजा दिन्छ कि दिँदैन?
प्रकृतिको कसी – के मृत्यु हरेक चीजको प्राकृतिक स्वभाव हो? के सबैले मर्नुपर्छ?
यसरी हामी कुनै एक शिक्षा लिन्छौं (जस्तै मृत्युबोधको शिक्षा) र त्यसलाई माथिका प्रमाणहरूको कसीमा राखेर परीक्षण गर्छौं। यसका लागि हामी आवश्यकता अनुसार समय छुट्याउँछौं। यो विषयमा दश मिनेट समय देउ, त्यो विषयमा बीस मिनेट समय देउ – यसरी समयको पावन्दी लगाइएको हुँदैन। धेरै हतार गर्नु राम्रो हुँदैन किनकि हतार गर्नाले आफूले ध्यान दिन खोजेको कुराको अर्थ बुझ्न सकिँदैन। कुनै पनि शिक्षालाई पूर्णतः आफ्नो अनुभवमा ल्याउनु र त्यसमाथि अभ्यास गर्नु जरुरी हुन्छ।
मूलतः हामी यो कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ कि विषयवस्तुलाई हामीले राम्ररी बुझिसक्यौं, ताकि तिनलाई फेरी फेरी पल्टाएर हेरिरहन नपरोस्। त्यसैले तिब्बतीहरूको शैक्षिक परम्परामा वादविवादको चलन छ। त्यहाँ आफ्नो बुझाई सही छ कि छैन भनेर जान्ने मौका पाइन्छ। यो अभ्यासमा सबैजना सहभागी हुनुपर्छ, कक्षाकोठामा पछिल्तिर चुपचापसँग बस्न पाईंदैन। एक विद्यार्थीले एउटा कुरा भन्छ, उसको प्रतिद्वन्द्वीले या त त्यसलाई सही हो भन्नुपर्छ या गलत। यो अभ्यासको अर्थ ठीक उत्तर पत्ता लगाउने होइन, अपितु विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझ्यौं कि बुझेनौं भन्ने जाँच गर्ने हो। यो एक उत्तम अभ्यास हो, किनकि हामी आफैंले आफ्नो बुझाई ठीक भयो कि भएन भनेर त्यत्ति राम्रोसँग जाँच्न सक्दैनौं, जत्ति अरुले सक्छन्। वादविवादको अभ्यास गरिरहँदा वातावरणमा एक अलग्गै उर्जा जागृत हुन्छ। सहभागीमध्ये कसैले आफैंले भनेको कुरामा विरोधाभास हुने अर्को कुरा गर्यो भने निकै हाँसोठट्टाको स्थिति बन्छ। तर यो सबै मित्रतापूर्ण ढंगले गरिन्छ र सबै सहभागीले यो प्रक्रियामा आनन्द लिन्छन्।
यसप्रकारको सिकाईको फाइदा के हो भने तपाईं जतिसुकै जान्ने भएपनि कुनै न कुनै विन्दुमा तपाईंले आफ्नै कुराको विरोधाभास हुने कुरा गर्नुहुनेछ वा कुनै मूर्खतापूर्ण कुरा गर्नुहुनेछ। यसले अहंकार र घमण्डलाई शान्त गर्न सहयोग गर्छ। यसले संकोचबाट मुक्त हुन पनि सहयोग गर्छ। समूहमा सबैको अगाडि उभिएर तर्क गर्न संकोच त त्याग्नै पर्छ।
यस्तो अभ्यासलाई हामीले “यो केवल एक बौद्धिक क्रियाकलाप भयो। म त अन्तर्दृष्टि जगाएर ध्यान मात्र गर्न चाहन्छु” भनेर नकार्न उचित हुँदैन। वादविवादले नै हामीलाई ध्यान गर्न सहज बनाइदिन्छ। वादविवादपछि हाम्रो शंका मेटिन्छ र हामी आफ्नो बुझाईप्रति निश्चिन्त हुन सक्छौं। त्यसपछि हामी आफ्नो ज्ञानलाई पूर्ण निश्चिंतताका साथ ध्यानमा उपयोग गर्न सक्छौं। नत्र हाम्रो ध्यान धेरै दृढ हुन पाउँदैन। यस्तो औपचारिक वादविवादको अवसर यो सेमिनारमा उपलब्ध छैन।तर शिक्षामाथि छलफल गर्दा निश्चय नै सहयोग पुग्छ। यस्तो छलफलमा अहंकार वा घमण्डलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन। साथै अर्को व्यक्तिले ममाथि व्यक्तिगत रूपमा प्रहार गर्दैछ भन्ने सोचेर आफूलाई रक्षात्मक पनि बनाउनु हुँदैन।
बुद्धधर्ममा “कुनै तथ्यलाई सत्य हो भनी पत्याउनु” तथा “दृढ विश्वास गर्नु” भन्ने अभिव्यक्तिहरू प्रयोगमा आउँछन्। कुनै असत्य कुरालाई पनि हामी सत्य ठानिरहेका हुन सक्छौं, त्यसैले यो कुराप्रति हामी सतर्क रहनुपर्छ। कुनै कुरा राम्रोसँग नबुझिकनै राम्रोसँग बुझेँ भनेर सोच्न सक्छौं, त्यसैले यो कुराप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। विश्वास तब मात्र दृढ भएको मानिन्छ जब यसलाई कुनै पनि कुराले विचलित गर्न सक्दैन। यस्तो दृढ विश्वास हामीले विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।
तर दृढ विश्वासको विकास गर्दा जिद्दीपना र वैचारिक संकीर्णताको विकास हुने खतरा पनि हुन्छ। गलत बुझाईमा दृढ विश्वास हुने र त्यसलाई कसैले सच्याउन नसक्ने गरी हामी जिद्दी बन्न सक्छौं। यस्तो अवस्थालाई “मिथ्या दृष्टि” भनिन्छ। मिथ्या दृष्टि भयो भने हामी कुनै गलत कुरालाई सही मानेर बस्छौं र त्यसलाई लिएर यति ज्यादा हठी हुन्छौं कि कसैले त्यसको विपरीत केही कुरा भन्यो भने हामी उक्त व्यक्तिलाई शत्रु ठानेर उसमाथि आक्रमण गर्न समेत तैयार हुन्छौं।
जबसम्म हामी बुद्धत्त्व प्राप्त गर्दैनौं, तबसम्म हामी सबै विषयलाई धेरैभन्दा धेरै गहिराईबाट बुझ्न खोज्छौं। त्यसैले हामी भन्छौं – “आफ्नो बुझाईमा ढुक्क परेर नबस। आफ्नो उपलब्धिमा ढुक्क परेर नबस। बुद्धत्त्व प्राप्त नगरुञ्जेल तिमीले अझै धेरै कुरा सिक्ने, अझै धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने ठाउँ छ।” त्यसैले हाम्रो बुझाई सही भए पनि त्यो सबैभन्दा गहिरो स्तरको बुझाई नहुन सक्छ। परम पूजनीय दलाई लामाका एक गुरु ठ्रिजाङ् रिन्पोछे भन्नुहुन्थ्यो – “मैले लाम्-रिम्-छेन्मो
(महान् मार्ग क्रम – चोङ्खापाद्वारा रचित एक आधारभूत र बृहत् ग्रन्थ) सयपल्ट पढिसकेँ। तर हरेक पल्ट मैले त्यसमा एक अलग्गै र झन् गहिरो बोध प्राप्त गरेको छु।” ज्ञान आर्जनको यो एक राम्रो उदाहरण हो। हाम्रो बुझाई प्रारम्भमै सही हुन सक्छ, तैपनि त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै गहिराईमा बुझ्न हामीले आफ्नो प्रयास निरन्तर राख्नु आवश्यक हुन्छ।
अब हामी मृत्यु ध्यानलाई यी चार प्रमाणको कसीबाट जाँचेर हेरौं, ताकि तिनको सही अर्थ थाहा होस् र तिनको उपयोग कसरी गर्ने पनि जानकारी होस्। तर यसका लागि पहिला हामीले मृत्यु र मृत्यु ध्यानका बारेमा शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। मृत्युसम्बन्धमा हामीसँग यी तीन तथ्य छन् –
मृत्युको समय अनिश्चित छ।
मृत्युको समयमा धर्मबाहेक अरु केही चीज काम लाग्दैन।
हामी सबैको मृत्यु हुन्छ। यो कुरा अवश्यंभावी छ – तपाईंका लागि, मेरा लागि, हामीले व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने वा नचिन्ने सबैका लागि। मृत्युको घण्टी कतिखेर बज्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। मृत्युको समयमा हामी आफैंले निर्माण र विकास गरेको चित्तको सकारात्मक प्रवृत्ति – जुन चित्तको स्वाभाविक सततः गुण बनिसकेको हुन्छ – ले मात्र हामीलाई सहयोग गर्छ।
मृत्यु अवश्यंभावी छ। निर्भरताको कसीबाट हेर्दा यो केमा निर्भर गर्छ भनेर प्रश्न गर्छौं। यसलाई हामी विभिन्न स्तरबाट जाँच्न सक्छौं। प्रथमतः मृत्यु जीवनमा निर्भर गर्छ। तपाईं बाँचेको हुनुपर्यो, अनि मात्र मर्ने कुरा आउँछ। त्यस्तै हामी प्रत्येक दिन बृद्ध हुँदै गैरहेका हुन्छौं। हाम्रो बलवान शरीर निर्बल बन्दै गैरहेको हुन्छ। मृत्यु यो शरीरमाथि निर्भर गर्छ जुन बिरामी पर्न सक्छ, जसलाई कुनै गाडीले ठक्कर दिन सक्छ, अथवा त्यस्तै कुनै कारणले नाश हुन सक्छ।
मृत्युमाथि चिन्तन गर्नुअघि हामीले आफ्नो अनमोल र अद्भूत मानव जीवनलाई बुझ्नु आवश्यक छ। निर्भरताको कसीमा जाँच गर्ने यो गहन स्तर हो। मृत्युबोधको तात्पर्य हामीलाई आफ्नो अनमोल मानव जीवन राम्रोसँग उपयोग गर्न प्रेरणा दिनु हो। हामीले आफ्नो जीवनलाई र जीवित रहँदा प्राप्त हुने आत्मसुधारको अवसरलाई राम्रोसँग बुझेनौं भने यो जीवन गुमाउँदा के होला भन्ने विषयमा सोच्न सक्दैनौं। “म जीवित छु, त्यसैले म आफ्नो शरीर र चित्तलाई सकारात्मक लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा लगाउँछु” – अधिकांश मानिसले यसरी सोच्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो जीवन त्यत्तिकै खेर फाल्छन्। यसरी हेर्दा हामी थाहा पाउँछौं कि मृत्युको बोध वास्तवमा जीवनको बोधमा आधारित हुन्छ।
हामी आफूले पाएको अनमोल मानव जीवनको महत्त्व बुझ्छौं र जान्दछौं कि हामी अन्य धेरै निम्नतर स्थितिहरूबाट मुक्त छौं। हाम्रो जन्म साङ्लाको रूपमा भएन, नत्र हामीलाई जसले देख्यो उसैले कुल्चेर हिँड्ने थियो। हाम्रो जन्म एउटा सानो माछाको रूपमा पनि भएन, नत्र हामीलाई ठूलो माछाले जिउँदै खाइदिने थियो। हाम्रो जन्म झिंगाको रूपमा पनि भएन। सोचौं, यदि हामी झिंगा भएर जन्मेको भए के काम गर्न सक्थ्यौं होला? हाम्रो जिन्दगी नै मलमूत्र र फोहोरको डंगुरमा भुन्भुनाउँदै बित्ने थियो।
व्यावहारिकताको कसीमा मृत्युबोधलाई हेर्नुको उद्देश्य केवल निराशा उत्पन्न गर्नु मात्र होइन। “अहो, कस्तो नराम्रो! म त एकदिन निश्चित रूपमा मर्नुपर्ने रहेछ!” यसरी सोच्नु यो ध्यानको उद्देश्य होइन। यसको व्यावहारिक उद्देश्य हामीसँग जति अनमोल समय बाँकी छ, त्यसको सकेसम्म राम्ररी उपयोग गर्न प्रेरित गर्ने हो। किनकि हामीलाई आफू कहिले मर्छु भन्ने थाहा छैन। मेरा अनन्य मित्रकै उदाहरण लिउँ। उनको स्वास्थ्य एकदम राम्रो थियो, उनी धेरै बृद्ध पनि भैसकेका थिएनन्। उनी रक्सी वा चुरोट खाँदैन थिए। उनलाई उच्च रक्तचापको समस्या पनि थिएन, शारीरिक कसरत पनि प्रसस्तै गर्थे, ध्यानको अभ्यास पनि राम्रोसँग गर्थे। तर एकदिन बिहान नुहाएपछि उनलाई हृदयाघात भयो, उनी लडे, र तत्काल त्यहीँ मृत्यु भयो। त्यत्ति सजिलै उनको जीवन सकियो।
हाम्रो यो अनमोल जीवनको अन्त कहिले हुन्छ, त्यसको कुनै टुंगो छैन। र, मृत्यु प्रायः हामीले नसोचेको ढंगले आउँछ। मृत्युका लागि न तपाईं बुढो हुनुपर्छ, न बिमारी। त्यसैले मृत्युमाथि चिन्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य अल्छीपना र ढीलासुस्तीको बानीलाई हटाउनु हो, हरेक कुरालाई भोलीका लागि साँच्ने बानीबाट छुटकारा पाउनु हो। मेरा दिवंगत मित्र एलनको उदाहरण लिउँ। उनकी आमा धेरै बृद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँको स्वास्थ्य पनि राम्रो थिएन। एलन आफ्नी आमालाई भौतिक र आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनी हरेक सप्ताहान्तमा आमालाई भेट्न जान्थे, उनको ख्याल राख्थे, उनका लागि बजारबाट सामान किनेर लगिदिने आदि काम गर्थे। उनको योजना थियो – आमाको मृत्यु भयो भने तत्काल जागिरबाट सेवानिवृत्ति लिने। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला एक वर्षको वज्रसत्त्व शिविरमा बसेर शुद्धिकरणको साधना गर्ने। अनि अन्य लामा साधनाहरू गर्ने। त्यो उनको योजना थियो।
मैले माथि भनेजस्तै, उनी एकदमै गम्भीर साधक थिए। तर उनी कहिल्यै पनि लामो ध्यान साधना शिविरमा बसेनन् किनकि उनी हरक्षण आमाको सेवाका लागि र उनको आर्थिक सहायताका लागि आफूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्थे। त्यसैले उनले जागिर खाइराखे। उनले के गर्नुपर्थ्यो होला? आफ्नी आमाको सेवा गरिरहने वा अन्य कसैलाई सेवाका लागि राखेर मौका मिल्नासाथ कुनै ध्यान साधनामा जाने? यस्तो अवस्थामा धर्मले हामीलाई के गर्ने सल्लाह दिन्छ? मृत्युबोधको अभ्यासले हामीलाई के गर्न सिकाउँछ? त्यो अवस्थामा म भएको भए के गर्थें होला? यसरी सोच्नु उपयोगी हुन्छ।
एउटा उपाय छोटो अवधिको साधना शिविर गर्ने र आफ्नी आमाको सेवा गरिरहने हुनसक्छ। साधना शिविर पूर्णकालिन हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी बिहान र बेलुकाको साधना गरेर दिउँसोको समय अन्य काम गर्न सक्छौं। साधना शिविर गर्नु राम्रो कुरा हो, तर अरु प्राणीले हामीलाई लगाएको गुन पनि तिर्नुपर्छ। त्यसमा पनि आफ्नी आमाको गुनको त कुरै भएन जसबाट हामीलाई यो जीवन मिलेको छ। हामीले आफ्ना मातापिताको ख्याल राख्नुपर्छ। “उनीहरू कहिले मर्लान् र म यो दिक्कलाग्दो जागिर छाडेर शान्तसँग बस्न पाउँला” यसरी सोच्नु हुँदैन। आफ्ना मातापिताको हेरचाह गर्नाले असीमित पुण्य आर्जन हुन्छ। तर यदि हामीले आफ्ना मातापिताको चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन भने आफ्नो जीवन बाँकी छँदै सकेसम्म उत्तम ढंगले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ।
प्रायः तिब्बती लामाहरू पश्चिमी शिष्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्, किनकि हामीमध्ये धेरैजसो धर्मप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध र समर्पित हुँदैनौं। तिब्बतीहरूका लागि धर्मको जति महत्त्व छ, त्यति महत्त्वको बोध हामीले गर्न सक्दैनौं। धेरै पश्चिमाहरू यसलाई सजिलो ढंगले लिन्छन्। “आज म थाकेको छु। प्रवचन सुन्न अर्कोचोटि जाउँला,” – उनीहरू यसरी सोच्छन्। तर यदि हामी साँच्चिकै धर्मप्रति गम्भीर छौं, र मृत्युको बोध तथा अमूल्य मानव जीवनको महत्त्व हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ भने हामी शिक्षा ग्रहण गर्ने कुनै अवसर पनि खेर फाल्न चाहँदैनौं। हाम्रो मुड कस्तो छ, त्यसले फरक पार्दैन।
हाम्रो अमूल्य जीवनको अन्त निश्चित छ। तर कहिले, हामीलाई थाहा छैन। हामी आफ्नो बाथरुममा हृदयाघात भएर ढल्न र मर्न सक्छौं। हामीलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दा बसले ठक्कर दिन सक्छ। त्यसैले हामी आफ्नो जीवन खेर फाल्न चाहँदैनौं। मृत्युबोधले हामीलाई अल्छीपना त्याग्न सहयोग गर्छ। यसले हामीलाई आफूसँग उपलब्ध अवसरको सकेसम्म सदुपयोग गर्ने प्रेरणा दिन्छ। तर यो बोधले हामीलाई तनाव र अशान्ति दिन हुँदैन। हामी प्रायः गौण कुराहरूमा तनावग्रस्त र अशान्त हुन्छौं, यो हाम्रो बानी नै भैसक्यो। त्यसैले हामी धर्मको अभ्यास पनि तनावले भरिएर गर्छौं। हामी आफ्नो धर्म अभ्यासमा गम्भीर हुनुपर्छ, तर आरामपूर्वक। त्यसको मतलब अल्छी हुनुपर्छ भनेको पनि होइन। तपाईंले आफ्नो चित्तमा सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गर्नुभएको छ भने चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि मृत्युको समयमा यही प्रवृत्तिले सहयोग गर्छ।
अब हामी प्राप्त शिक्षालाई तेस्रो कसी अर्थात् तर्कको कसीमा राखेर बुद्धको शिक्षासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर परीक्षण गर्छौं। यसका लागि हामीले बुद्धधर्मको ज्ञान निकै राम्रोसँग प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। धेरै उपदेशहरू श्रवण गरेको हुनुपर्छ अथवा धेरै ग्रन्थहरू पढेको हुनुपर्छ। धेरैजसो बौद्ध शिक्षामा अनित्यताको ज्ञान दिइन्छ, जुन बुद्धको शिक्षासँग मेल खान्छ।
के यो तर्कसंगत छ त? मृत्यु हरेक दिन हाम्रो निकट आइरहेको छ। यो जीवनको सबै खेल एक दिन खत्तम हुनेछ। मृत्यु त अवश्य नै आउँछ। त्यस्तो कुनै उपाय छैन जसले मृत्यु आइसकेपछि यसलाई उल्टो दिशामा फर्काउन सकोस्। हाम्रो जीवनकाल निश्चित अवधिको छ, र यो हरेक दिन, हरेक मिनेट, हरेक सेकेन्ड कम हुँदै गइरहेको छ। यो सत्यलाई हामीले आफ्नो चित्तको सन्तुलन नगुमाइकन, गम्भीरतापूर्वक तर आरामका साथ, आफ्नो अन्तरमनबाट आत्मसात गर्न सक्यौं भने अद्भूत उपलब्धि हुनेछ। हामीले आफ्नो जीवनकालमा धर्मको अभ्यास गर्न समय नपाउन सक्छौं। तैपनि हामीले एक दिन त मर्नै पर्छ। यो संसारमा हरेक जीवित मानिस अन्ततः मरेकै छन्।
यो सबको परिणाम के त? मृत्यु हाम्रो निकट आउँदै छ भन्ने कुराको साँच्चिकै गहिरोसँग बोध भयो र आफूसँग रहेको मानव जीवन अमूल्य रहेको कुरामा पूर्ण विश्वास भयो भने त्यसले हाम्रो अल्छीपना हटाउन सहयोग गर्छ। यसको परिणामस्वरुप हामी आफूलाई प्राप्त अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्छौं। हामी आफ्नै अनुभवले यो अभ्यास हितकर भएको देख्न सक्छौं।
चौथो कसी, अर्थात् चीजहरूको प्रकृतिको कसी, ले के भन्छ भने अस्तित्त्वमा आएको हरेक चीजको एक न एक दिन अन्त हुन्छ। यो कुरा सुनिश्चित छ। हरेक चीजको सत्य यही हो, यो नै यथार्थ हो। यो कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्ने कुनै उपाय छैन।
माथिको उदाहरणले के देखाउँछ भने हामी प्राप्त शिक्षाको अन्वेषण प्रमाणका चार कसीको सहयोग लिएर र तिनलाई आफ्नो अनुभवको धरातलमा राखेर गर्न सक्छौं। तर कुनै पनि शिक्षाप्रति शत प्रतिशत विश्वास जगाएर आफ्नो जीवनमा उतार्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यो निरन्तर गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो। हामी बौद्धिक रूपमा कुनै शिक्षा लिइहाल्न सक्छौं, तर त्यसलाई भावनाको स्तरमा उतार्न र त्यसप्रति दृढ विश्वस्त हुन सजिलो छैन। फेरी, शरीर र मनले पनि फरक ढंगले व्यवहार गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि मेरो साथीको मृत्युमा म मानसिक र भावनात्मक रूपमा शान्त थिएँ, तर मेरो शरीरको शक्ति पूरै निचोरिएर खङ्ग्रङ्ग भएको थियो।
अर्थात् शारीरिक स्तरमा शोकको अनुभूति थियो। किनकि “सबैजना एकदिन मर्ने नै हो” भन्ने बोधलाई शरीरको स्तरसम्म उतार्न सजिलो छैन। मानसिक स्तरमा पनि शोकको अनुभूति हुन्छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो। आखिर हामी बुद्ध होइनौं, हामीले मुक्त अवस्था प्राप्त गरिसकेका छैनौं। हामी अझै पनि नकारात्मक आवेग (क्लेश) र दुःखबाट मुक्त भैसकेका छैनौं। तर हामी त्यो अवस्था प्राप्त गर्नका लागि प्रयत्नशील छौं।
मुक्ति र बोधि के हो भन्ने राम्ररी जानिसकेपछि हामी आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्छौं। लक्ष्य राम्ररी निर्धारण गरिसकेपछि मात्र त्यो दिशामा कदम चाल्न सक्छौं। परीक्षणको चार कसीले हामी जे गर्दैछौं, त्यसमा निश्चयपूर्वक अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ।
मृत्युमाथि ध्यान गर्नाले हामी आफ्नो मृत्यु सुनिश्चित भएको कुरालाई आत्मसात गर्न सक्छौं। तर कहिले, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी आफ्ना लागि जुन कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, त्यही मात्र गर्छौं। मृत्युबोधले हामीभित्र असाधारण परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसपछि आलस्य वा निराशामा समय बर्वाद गर्न सकिँदैन।
रसियाको मस्कोमा सन् २००९ मे मा आयोजित सेमिनारबाट। नेपाली अनुवाद अरुण पौडेल।